Kinky Curly Hair: Nwee isi nkwụsị & Best Clip-Ins 2019
Ụlọ ahịa Site Texture
BỤRỤ / CROCHET HAIR
Ihe mgbakwunye Ngwa & Ụgbọelu
Nhazi & Mbupu
Nlekọta & Nchekwa
Kinky Curly Hair N'ihe Mgbochi @ My Natural Hair Extensions
👸🏿 Welcome Iji My Hair Hair Extensions, Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ iji nye ụmụ nwanyị ndị na-acha odo odo àgwà kacha mma. Ọ bụ ọrụ ika anyị iji nye ndị ahịa anyị ohere kachasị mma iji mee ka mma mara mma. Anyị na-ebugharị n'ụwa nile ma na-enye nchịkọta dị iche iche nke nchịkọta, clip-ins, wigs, na closures maka ndị inyom na agba. 😄
Kinky n'ụzọ ziri ezi
Anyị na-enye ngwaahịa na ogologo 10 "- 28". Kama ịchọrọ nkenke ma ọ bụ ogologo ma ọ bụ ogologo oge! Ọtụtụ ndị ahịa ekwuola na ha hụrụ nhọrọ nhọrọ anyị dịka ọ na-enye ha nhọrọ dị mma nke nhọrọ. Anyị ghọtara na ịhọrọ ndọtị kachasị mma dị mkpa ma ọ bụ ya mere anyị na-enye anyị divas àgwà kachasị mma na clip-ins, ịkepụta, wigs, na ụdị nkwanye dịgasị iche maka ntutu isi.
Zụrụ Kinky Curly Hair that Best Represents You ...
Mfe Gwakọta Eji Ntutu Uwe
Anyị bụ ndị isi na egwu ma mara mma kinky curly ntutu. Mgbe ị na-agwakọta uwe anyị na ejiji gị, ọ pụtara ìhè na ịdị mma gị bụ ihe kpatara ya. Anyị kinky na-etinye aka bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu n'ụwa. Anyị na-ebufe ngwaahịa anyị n'aka ụmụ nwanyị na mpaghara dum nke isii kwa ụbọchị, na ọ bụ ahụmahụ anyị na ha niile chọrọ ka ha na-ekpuchi ihe dị mkpa n'ime ha.
Kinky Hair Extensions For Women of Color
Anyị na-arụsi ọrụ ike iji jide n'aka na ndị ahịa anyị ga-enweta ihe ndozi kacha mma kinky online. Anyị na-arụ ọrụ maka iwu mbupu na akwụkwọ nchịkọta maka ndị ahịa anyị 'n'ụwa nile. Jide n'aka ịhụ anyị afro kinky ntutu, na ụdị a kasị mma maka ndị na-enwe obi ụtọ clip-ins or wigs na karịsịa ụdị 4 ịkwanye ntutu. Uwe eze nwanyi bu okpueze na ebube ya, ya mere, anyi choro ijide ihe nile di gi mkpa mgbe gi na enye ndi oru ahia.
Ihe Ntucha Na-ekpo ọkụ Na-ekpo ọkụ n'Ịntanet
Ka anyị na-elekwasị anya na ihe dị oké ọnụ ahịa nke dị na ntutu isi nke ntutu isi nke dị n'eziokwu maka ederede nke ndị eze mịlanin. Anyị adịghị agbanwe agba nke clip-ins anyị ka anyị na-agbanye 1b ngwaahịa anyị.
Ị nwere ike nweta ọtụtụ ụdị nchebe na ụda anyị, closures ma ọ bụ wig. Ịnwere ike ịnwale ntanetị anyị na ndọtị maka mgbanwe ngwa ngwa ma dị mfe. Ihe ndị dị ịtụnanya dị ka anyị afro kinky curly clip-ins nke ahụ na-enye gị ohere iji nweta ogologo oge na olu na-enweghị ihe mgbochi ozugbo.-
Mụta otu esi arụnye: nke kachasị mma na ntanarị maka African Hair Hair
Otu esi eto eto ogologo nha nke 2
Otu esi eto eto
Kedu esi mee Curlformers na Waveformers
Jikọọ na VIP CLUB!
Jikọọ na Ndepụta Ntanetị maka Nanị Ịbanye Na Nkwalite Ndị Pụrụ Iche
Jikọọ na listi nzipu ozi anyị wee nweta akwụkwọ mbupu n'efu! Anyị ga-emelite gị na ahịa, ụzọ ntanye, asọmpi & ngwaahịa ọhụrụ.
BỤ EZE EZINỤLỌ!
Welcome Diva: Ekele Maka Ịbanye
Send ka Email Address
Adreesị ozi ịntanetị gị